Onodu aku na uba nke Vila Malitere ịrịa | Martech Zone
Adịghị m onye ofufe nke ụlọ ọrụ na-etinye ihe niile na-anwa ịga ịrịa… ọtụtụ enweghị ike ị nweta usoro ahụ ma nwee nnukwu nsogbu. Nke a apụtaghị na ịnweghị ike iwepụta nnukwu mmụba na vidiyo vidio, n'agbanyeghị. Otu nnukwu onu ogugu na ihe omuma a sitere n'aka ndi isi na ahia, Onodu aku na uba nke oria ogwu, guzo apụ… the mgbasa ozi.
Considerationzụta ihe / ebumnuche na-abawanye 14.3% site na nlele nke atọ nke mgbasa ozi na saịtị nnabata vidiyo kacha elu.
Nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ mara mma nke na-adọrọ mmasị na nke ọtụtụ ndị ahịa na-eji. Youtube na-enye 4 ụdị mgbasa ozi TrueView dị iche iche:
Na-iyi mgbasa ozi kpọọ dị ka TV-style mgbasa ozi tupu ma ọ bụ n'oge vidiyo ọzọ site na onye mmekọ Youtube. Ndị na-ekiri ya na-ahụ sekọnd 5 nke vidiyo gị wee nwee ike ịnọgide na-ele ma ọ bụ na-egwu ya.
Na-wepụrụ ebubo na mgbasa ozi gosi n'ihu vidio vidio Youtube bụ nkeji 10 ma ọ bụ karịa. Ndị na-ekiri ahọrọ ịhọrọ otu n'ime mgbasa ozi atọ ma ọ bụ hụ nkwụsị oge azụmahịa n'oge vidiyo ha kama.
Na-ọchụchọ na gosi n'elu ma ọ bụ aka nri nsonaazụ ọchụchọ na peeji nsonaazụ ọchụchọ
Na-egosipụta na mgbasa ozi gosipụta na vidio Youtube ndị ọzọ, ma ọ bụ na webụsaịtị na Google Display Network nke dakọtara na ndị na-ege gị ntị.
Nke kachasị, na mgbasa ozi Youtube ị na-akwụ ụgwọ naanị mgbe onye na-ekiri ahọrọ ịhọrọ vidio gị.
Tags: Vidio Ahịaustreammalitere ịrịavidiyo vidiyo